RNDP ရဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို စော်ကားမှု့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သတိပေးတာနဲ့ လုံလောက်ပြီလား | ဧရာဝတီ Irra Wadi
← ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည်သဘာဝအလျှောက် တိုင်းရင်းသား၊နိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်းစာတမ်း …
၁၉၇၃ ခုနှစ်သန်းခေါင်းစာရင်းကောက်ခံစဉ်ကရိုဟင်ဂျာ အပါအ၀င်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၄၃) မျိုးရှိခဲ့ … →
RNDP ရဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို စော်ကားမှု့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သတိပေးတာနဲ့ လုံလောက်ပြီလား	Posted on December 28, 2012	by irrawadi RNDP ရဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာကို စော်ကားမှု့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် သတိပေးတာနဲ့ လုံလောက်ပြီလား
ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ၊ ၂၀၁၂
ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ (RNDP) ကို ကိစ္စရပ် (၃) ခု နှင့်ပတ် သက်ပြီး နေပြည်တော် မှာ ခေါ်ယူ သတိပေးခဲ့တယ်။ ကိစ္စရပ် (၃) ခုတွင် RNDP ပါတီရဲ့ နိုင်ငံရေးစာစဉ်ဖြစ်တဲ့ တိုးတက်ရေးသတင်းလွှာ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၁၂) တွင် အစ္စလာမ်ဘာသာ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအား မိုက်ရိုင်းစော်ကားသည့် အရေးအသားများကြောင့် ခေါ်ယူသတိပေးခြင်းဖြစ်သည်။
တိုးတက်ရေးသတင်းလွှာမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးရှင် မာဃသစ္စာ ဆိုသူမှ ၇ခိုင်ပြည်နယ် ပြိုကွဲခဲ့လျှင် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်တုိ့ အပေါ် စော်ကားရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အမျိုးသားလွှတ်တော် နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဒေါက်တာအေးမောင် ခေါင်းဆောင်သည့် RNDP ပါတီရဲ့ တရားဝင် နိုင်ငံရေးစာစဉ်သည်
(၁) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ
(၃) နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေတို့ကို ချိုးဖောက်လျှက်-
(က) ကမ္ဘာ့လူသန်းပေါင်းများစွာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်လျှက်ရှိသော အစ္စလာမ်သာသနာကို အသရေဖျက် စော်ကားရေးသားခြင်း။
(ခ) အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏ ပွဲတော်များကို ရှုံ့ချစော်ကား ရေးသားခြင်း။
(ဂ) အစ္စလာမ် ၀တ်ကျောင်းတော်များကို မလိုမုန်းထား ရေးသားခြင်း။
(ဃ) အစ္စလာမ့်ဝတ်ကျောင်းတော်များမှ ၀တ်ပြုရန် ဆော်သြဖိတ်ခေါ်ခြင်းကို တိရိစ္ဆာန်အော်သံနှင့် ခိုင်နှိုင်းဖော်ပြခြင်း။
(င) အစ္စလာမ်၏ စွန့်လွှတ်လှူမှုဒါနအား အလွဲအဓိပ္ပါယ်ဖွင့် စော်ကားရေးသားခြင်း။
(စ) အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တိုင်း၇င်းသား၊ နိုင်ငံသားများအားလုံးတို့ကို ရုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာ စော်ကားရေးသားခြင်း။
(ဆ) အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ ဖန်ဆင်းရှင်၏ နာမတော်ဖြင့် အစပြုပါအံဟူသည့် ဆုတောင်းမေတ္တာစကား၏ သင်္ကေတကိုဖေါ်ပြလျှက် တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ သမ္မအာဇီဝဖြင့် စီးပွားရှာသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသားများအား မလိုမုန်းထားရေးသားလှုံ့ဆော်ခြင်း။
(ဇ) ဘာသာသာသနာ ယုံကြည်မှုမတူသူများနှင့် ထိမ်မြားလက်ထပ်ခြင်း မပြုရန်နှင့် မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ အတင်းအဓမ္မ အစ္စလာမ်ကို ယုံကြည်ခိုင်းခြင်း မပြုရန်၊ မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ သာသနာအတွင်း အဓမ္မသွတ်သွင်းခြင်း မပြုရန် အစ္စလာမ်သာသနာက ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ တားမြစ်ထားပြီး ဖြစ်ပါလျှက် အစ္စလာမ်နှင့် မွတ်စလင်မ်တို့ မဟုတ်မတရား စွတ်စွဲအသရေဖျက်ခြင်း။
(ဈ) ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေးပျက်ပြား၍ တိုင်း၇င်းသား၊ နိုင်ငံသားအချင်းချင်း မုန်းတီးနားကြည်း ရန်မီးပွားကာ ပြည်ထောင်စုကြီး ပြိုပျက်အောင် ရည်ရွယ်ချက်ကျကျ လှုံ့ဆော်ရေးသားလျှက်ရှိခြင်း။
(ည) ဘာသာရေးခုတုန်းလုပ်ကာ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်သည့် ရေးသားလှုံ့ဆော်မှုများ ပြုလုပ်နေခြင်း။
(ဋ) ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူ အားလုံးကို တိရိစ္ဆာန် နှင့် ခိုင်းနှိုင်းပြီး ရှိုင်းပြစွာရေးသားထားခြင်း၊
ယခုကဲ့သို့ RNDP ရဲ့ ကမ္ဘာဘာသာကြီးတခုအား ပြောင်လှောင်ရေးသားမှုကို အောက်တွင်ပူးတွဲဖော်ပြထားသည့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ သတိပေးရုံ တင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်း
ပုဒ်မ ၆(ဃ) လူမျိုးရေး (သို့) ဘာသာရေး(သို့) လူတစ်ဦးချင်း (သို့) လူအများနှင့် ပတ်သက်၍ ပဋိပက္ခ ဖြစ်စေနိုင်သည့် သိက္ခာနှင့် ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့်ေ၇းသားမှု့ ဟောပြောမှု့ (သို့) စည်းရုံးမှု့မပြုလုပ်ရ
(င) ဘာသာေ၇းကို နိုင်ငံေ၇းအတွက် အလွဲသုံးစားမပြုလုပ်ရ
ဟူသော စည်းကမ်းများကို အဆိုပါ ဝန်ခံချက်များကို ချိုးဖောက်လျှင် ပါတီကို ဖျက်သိမ်းသည့် အထိ အရေးယူရမည်ဟု ကော်မရှင်ရဲ့ ပေးစာမှာ ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့သော် ယခု RNDP မှ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေသည်ကို သတိပေးရုံတင်ပေးခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်း စုံ နှစ်ထောင်နှင့် ချီပြီး အေးချမ်းစွာ နေထိုင်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတွင် နိုင်ငံသား အချင်းချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်စေမည့် လုပ်ရပ်များကို ကာကွယ် တားဆီးရန် အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တို့မှ တိတိကျကျ ဥပေဒေအတိုင်း အမြန်ဆုံးအရေးယူဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပေသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်တို့ကို စော်ကားထားသည့် RNDP ပါတီစာစဉ် တိုးတက်ရေးသတင်းလွှာ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၁၂)
လှိုင်းဘွဲ့၊ ပိုင်ကျုံမြို့နယ်ခွဲရှိ မွတ်စလင်ရွာများ လုံခြုံရေး အခြေအနေစိုးရိမ်ရ (Nov 24, 2012)
အဖျက်ခံရမည်ဟု သတင်းထွက်နေသော လှိုင်းဘွဲ့မြို့မှ မွတ်စလင်မ်ရွာအား လုံခြုံရေး ချထား (Nov 24, 2012)
မွတ်စလင် မုန်းတီးရေး ကြေညာချက် လှိုင်းဘွဲ့တွင် ယုံထင်ကြောင်ထင်ဖြစ် (Nov 23, 2012)
ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးတွင် အစ္စလာမ် ဆန့်ကျင်ရေး သွေးတိုးစမ်း လှုပ်ရှား (Nov 21, 2012)
အစ္စလာမ် မုန်းတီးရေးစာများ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖြန့်ဝေနေ (Nov 21, 2012)
မွန်ပြည်နယ် မွတ်စလင် ဆန့်ကျင့်ရေး လှုပ်ရှားမှု့နှင့် ၈၈မျိုးဆက်အဖွဲ့ ဆက်စပ် ပတ်သက်မည်ကို ဒေသခံများစိုးရိမ် (Nov 21, 2012)
တတိယကြိမ် အကြမ်းဖက်မှု့ဖြစ်လျှင် အိုဘားမားတာဝန် ဟု Dr အေးမောင် ခြိမ်းခြောက်ပြောဆို (Nov 20, 2012)
This entry was posted in General. Bookmark the permalink.	← ရခိုင်ပြည်ရှိမွတ်ဆလင်များသည်သဘာဝအလျှောက် တိုင်းရင်းသား၊နိုင်ငံသား ဖြစ်ကြောင်းစာတမ်း …